PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - UMengameli omusha kusasa e-SA
UMengameli omusha kusasa e-SA
Isolezwe - 2018-02-15 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
ININGIZIMU Afrika izoba noMengameli omusha kusasa emuva kokuthi i-ANC ithe kufanele kucace ukuthi izwe libhekephi futhi kwethulwe nenkulumo yesizwe bese kwethulwa isabelomali ngoLwesithathu oluzayo.
Izolo uMgcinimafa we-ANC, uMnuz Paul Mashatile, uthe ubuholi obuphezulu benhlangano bunqume ukuthi amalungu ayo ePhalamende avotele ukungabethembi ubuholi bukaMengameli Jacob Zuma emuva kokugoloza kwakhe ukwehla esikhundleni yize isigungu esiphezulu se-ANC simnike incwadi emtshela ukuthi makehle.
USotshwebhu we-ANC ePhalamende, uMnuz Jackson Mthembu, uthe njengoba i-EFF isiphakamise ukuthi kube nevoti lokungabethembi ubuholi bukaZuma bazochibiyela isiphakamiso sayo bese kuvotwa namhlanje.
“Uma kuwukuthi umengameli uyehla kusho ukuthi kuzoba noMengameli obambile ozothula inkulumo yesizwe. Abantu balindile bafuna ukwazi ukuthi izwe libhekephi, asikwazi ukubalindisa isikhathi eside,” kusho uMthembu.
Uthe ngokohlelo lwabo bazoba nezithangami ezimbili ngoLwesihlanu – esokuqala esokuqokwa kukamengameli omusha wezwe nokufungiswa kwakhe yiNhloko yamajaji uChief Justice Mogoeng Mogoeng noma elinye ijaji azobe elijubile.
Isithangami sesibili esokwethulwa kwenkulumo yesizwe kamengameli omusha. “NgoMsombuluko amalungu ePhalamende azonikwa ithuba lokubuza ngenkulumo kamengameli omusha. NgoLwesibili uzophendula bese ngoLwesithathu siba nesabelozimali esizokwethulwa ngungqongqoshe wezimali,” kusho uMthembu.
Bekungokuqala abaholi bamaqembu aphikisayo nabe-ANC bevumelana, bonke bathe bayakweseka ukuvotela ukungabethembi ubuholi kukaMengameli Jacob Zuma.
Ilungu le-IFP ePhalamende, uMnuz Narend Singh, ubuze ukuthi kuzokwenzekani uma uZuma esula?
UMthembu uthe kusho ukuthi bazoqhubeka nezinhlelo zokuvotela umengameli omusha kodwa bazoqale bahlangane bengamalungu ePhalamende.
USomlomo, uNksz Baleka Mbete, uthe uma uZuma ehla kusho ukuthi kuzongena umengameli wesikhashana ozokwethula inkulumo. UMnuz John Steenhuisen weDA noMnuz Floyd Shivambu we-EFF bathe abamdingi umengameli wesikhashana badinga kuqokwe umengameli wezwe ozobhekana nomthetho uma enze okungalungile.